Caawimada maaliyadeed ee magangalya doonka - Migrationsverket
Ekonomiskt stöd för asylsökande – somaliska
Waa muhiim in aad naftaada taageerto Haddii aanad shaqaysan lacagtaada oo aanad haysan ilo kale, waxaad codsan kartaa taageerada maaliyadeed ee Guddida Socdaalka. Taageerada maaliyadeed waxay ka koobantahay dhowr qaybood: kharashka maalin laha ah, hoyga magdhowga iyo gunnada gaarka ah.
Markaad raadinayso magangalyo waxaa in aad u sheegtaa Guddida Socdaalka inta ay leegtahay lacagta ama ilaha kale ee aad haysataa. Haddii aanad haysan wax ilo ah waxaad helaysaa magdhowga maalin kasta ah si aad u daboosho kharashkaaga maalin kasta.
Haddii xaaladaada maaliyadeed ay isbeddesho, tusaale ahaan waxaad heshay shaqo, waa in aad us heegtaa Guddida Socdaalka. In aanad u sheegin in aad shaqaysato lacag marka aad qaadato kharashka magdhowga maalilaha ah waa fal dambiyeed. Lacagta lagu siinayaa saamayn ayay ku yeelanaysaa haddii aad guurto. Sidaas daraadeed waa inaad marwalba u sheegto Hay’adda laata socdaaka baddii aad cinwan cusub samaysatay.
Akhri wax badan oo ku saabsan waxa aad samaynayso haddii shaqo lagu siiyo marka aad sugayso go’aanka
Gunnada maalin laha ah
Lacagta ama gunnada maalintii la bixiyaa way kala duwan tahay waxaanay ku xiran tahay haddii aad adigu deggan tahay mid ka mid ah guryaha Hey’adda laanta socdaalku leedahay ee cuntada laga bixiyo ama guryaha aanay cuntada laga bixin. Sidoo kale lacagta maalintii la bixiyo waxa saamayn ku yeesha haddii aad adigu doorato in tusaale ahaan aad soo hesho guri aad cid la deggenaato saaxiibo ama dad aad qaraabo tihiin.
Guriga cuntad­duna ay ku jirto magd­howga maalin kastaa waa
24 kr/maalintii dadka waa wayn ee keligood ah
19 kr/ maalintii qokii dadka waa wayn ee wadaaga kharashka qoyska
12 kr/maalintii carruurta ilaa oo ay ku jiraan 17 sano jirku.
Guriga cuntad­duna aanay ku jirin magd­howga maalin kastaa waa
71 kr/maalintii dadka waa wayn ee keligood ah
61 kr/ maalintii qokii dadka waa wayn ee wadaaga kharashka qoyska
37 kr/maalintii carruurta 0–3 sano jirka ah
43 kr/maalintii carruurta 4–10 sano jirka ah
50 kr/maalintii carruurta 11–17 sano jirka ah.
Qoysaska leh wax ka badan labba carruur ah waxay heli doonaan magdhowga maalinlaha ah ee labba carruur ah ee ugu wayn iyo nus magdhowga maalinlaha ah ee carruurta kale.
Ka sakow cuntadda magdhowga maalinlaha ah waa in uu ku filnaadaa dharka iyo kabbaha, daryeelka caafimaadka iyo dawada, daryeelka ilkaha, alaabta musqusha, alaabta kale ee macmiilka iyo hawlaha firaaqada.
Magdhowga maalinlaha ah waa la yarayn karaa haddii adigu
aanad la shaqayn dejinta aqoonsigaaga
aad xanibto baadhitaanka codsigaaga magangelyada addoo dhuuntay
aanad la shaqayn abaabulka safarkaaga dib ugu noqoshada wadanka haddii aad hesho go’aanka diidaya codsigaag ama in lagu mastaafurinayo.
Haddii aad u guurto xaafadaha ay ka jiraan dhibaatooyinka dhinaca shaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaa laguu diidikaraa lacagta gunnada ah ee aad xaqa u leedahay ee lagu siinayo. Sidoo kale waxaa iyadana laguu diidikaraa lacagta gunnada ah iyo lacagta sida gaarka ah loo bixiyo haddii aad sheegto cinwaan ka duwan kan aad run ahaantii deggen tahay, tusaale cinwaan ah postboxadress.
Ka akhri warbixin dheeraad ah oo ku saabsan meesha aad deggenaaneyso iskana hubi in cinwaanka aad rabto inaad u guurto uu saamayn ku yeelankaro xaq u lahaanshaha lacagta gunnada ee la bixiyo
Joojinta xaq u lahaans­haha kaal­mada dhaqaale
Marka laguu ogolaado sharciga deggenaanshaha waxaa lagaa joojinyaa lacagtii aad xaqa u lahayd. Haddii ay degmo ku qaadato oo aad deggen tahay guryaha Hey’adda laanta socdaalka markaa laguma siinayo sida caadiga ah lacagtii gunnada ahayd ee lagu siin jiray. Haddii guri aad adigu soo heshay aad deggen tahay oo aad cid la deggen tahay lacagta aad xaqa u leedahay waxa lagaa joojinayaa bil kadib marka aad sharciga deggenaanshaha hesho.
Waxaad sidoo kale waayikartaa in aad xaq u yeelato kaalmada dhaqaale ee la bixiyo haddii lagu siiyo go’aan celis ah ama go’aan tarxiil/masaafurin ah wakhtiguna wuxuu ka bilaabmayaa, marka uu dhammaado wakhtigii aad adigu si xor ah oo aan cidi ku khasbin aad u laaban lahayd. Taasi waxay khuseysaa qofka weyn ee aanay la deggenayn carruur ay da’doodu ka hoosayso 18 sano kuwaas oo aad adigu u tahay qofkii mas’uuliyadooda lahaa sida waalidka oo kale. Sidaas oo kale xuquuqda taageerada dhaqaale ee aad xaqa u leedahay way joogsanaysaa haddii aad wadanka ka baxdo.
Haddii aad leedahay baahi aad u xoogan oo ah shay aanay daboolin magdhowga maalinalaha ah waxaad codsan kartaa gunno u gaar ah iyada. Waa in aad muujisaa in aad leedahay baahi xoogan oo shayga ah ama adeega oo aanad laftaadu iibsan karin. Waxay noqon kartaa tusaalaha muraayadaha indhaha, gaadhiga carruurta ama dharka diiran ee jiilaalka. Guddida Socdaalku had iyo jeer waxay ka samaysaa qiimayn gaar ah oo baahida ah.
Waxaad keliya ka heli kartaa gunnada beddelka ugu jaban kaas oo looga baahanyahay in ay qanciso baahida.
Lacagta aad xaqa u leedahay ee sida gaarka ah loo bixiyo saamayn ayey ku yeelankartaa haddii aad adigu u guurto guri aad adigu iskaa u soo heshay oo ku yaala meelaha ay degmadu ka sheegeen inay ka jiraan dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo dhinaca arrimaha bulshada la xiriira.
Marka lagaaga yeedho in aad timaado Guddida socdaalka tusaale ahaan si aad u aragto wax ku saabsan baadhitaankaaga magangelyada, si aad ula kullanto sarkaalkaaga maamulka soo dhowaynta ama in aad ka qayb gasho dhacdada macluumaadka kooxda, waxaad gunno ka heshaa kharashkaaga safarka. La hadal sarkaalka maamulka ee ad la kulmi doonto wax ku saabsan kiisa
Foomka codsiga gunnada gaarka ah ee dadka waa wayn, lambarka foomka Mot78 Pdf, 480.4 kB, opens in new window.
Tani waa sida aad ugu buuxin doonto dadka waa wayn gunnada gaarka ah
Foomka codsiga gunnada gaarka ah ee dadka aan qaan gaadhka ahayn, lambarka foomka Mot79 Pdf, 481.1 kB, opens in new window.
Tani waa sida aad ugu buuxin doonto dadka aan qaangaadhka ahayn gunnada gaarka ah
Foomka Codsiga gunnada gaarka ah ee carruurta aan ciddi la socon iyo dhalinyara, lambarka foomka Mot72 Pdf, 659 kB, opens in new window.
Haddii aad shaqo hesho ama shaqo laguu soo jeediyo, waxaad dalban kartaa magdgowga guriga. Waxaa loola jeedaa shaqada ka dheer muddo saddex bilood ah marka aad u guurayso meesha Guddida Socdaalka aanay wax guri ah ka bixin. Magdhowga gurigu waa
850 kr/bishii qoysaska
350 kr/bishii qoyska hal qof ah.
Go’aanka ku saabsan magd­howga maaliy­a­deed
Marka Guddida socdaalku ay go’aan qaadato ku saabsan magdhowga maaliyadeed, waxaad heli doontaa aqbalaad ku saabsan go’aanka.
Iyaddoo maraysa sarkaalka maamulka ee cidda soo dhowayntaada ama
maraysa waregelinta la fududeeyay waxa loogu yeedho.
Wargelintala fududeeyay macnaheedu waxa weeye in Guddida Socdaalka ee Iswiidhan ay ku soo dirto go’aan warqadda boostadda cinwaanka aad sheegtay in aad ku nooshahay. Maalinta xigta waxaanu usoo dirnaa warqad kale isla cinwaan iksu mid ah oo aanu kugu wargelinayno in aanu kuu soo dirnay go’aanka. Waxaanu tan u samaynaa si aanu u yarayno khatarta khaladka. Sidan Guddida Socdalka waxay ka fekertaa in aad wargelin ka heshay go’aanka (lagugu wargeliyay) labba todobaad ka dib markaanu kuu soo dirno adiga, Intaa ka dib waxaad haysataa saddex todobaad oo aad rafcaan kaga qaadato go’aanka.
Haddii cinwaanka aad nasiisay aan la isticmaali Karin oo aad ka diiwaangashantahay Iswiidhan, go’aanka iyo warqadda maamulkuwaxaa loo diri doonaa cinwaanka diiwaanka diiwaangelintaada.
Ku fikir inaa si joogto ula socotid warqadaha bostada guriga laguugu soo diro.
Haddii ay hey’adda laanta socdaalku adiga kuu oggolaato lacagta gunnada ee maalintii la bixiyo waxa lagu siinayaa kaar bangi kaas oo ku xiran koontadaada/akoonkaaga halkaas ayaana lacagta laguugu shubayaa.
Inta ka akhriso warbixin ku saabsan kaarka bangiga oo dadka magangelyodoonka
Haddii aad doonayso in aad rafcaan ka qaadato
Haddii aad u malaynayso Guddida rafcaanku in uu qaaday go’aan khalad ah oo ku saabsan magdhowga, waxaad leedahay xaqa aad rafcaan kaga qaadato. Xaaladan waxaad u gudbin doontaa rafcaankaaga horta Guddida Socdaalka saddex todobaad gudahood laga bilaabo maalintaad ogaatay ( lagugu wargeliyay) go’aanka. Haddii Guddida Socdaalka aanu beddelin go’aanka rafcaankaaga waxaa loo wareejin doonaa maxkamadda maamulka ee sharciga taas oo baadhi doonta go’aanka mar labbaad. Haddii maamulka maxkamaddu diido rafcaankaaga, waxaad rafcaan ka qaadan karta horta Maxkamadda Rafcaanka (kammarrätten).
Waxa badan ka akhri waxa aad samaynayso haddii aad rafcaan qaadanayso
Haddii aad hayso su’aalo ku saabsan magd­howgaaga maalin­laha ah ama gunnooyinka
Haddii aad hayso su’aalo guud oo ku saabsan caawimada maaliyadeed ee magangalya doonka waxaad telefoon u soo diri kartaa Guddida Socdaalka. Laakiin haddii aad su’aalo ka hayso ku saabsan magdhowgaaga waaa in aad u timaada cidda soo dhowaynta. Shaqaalaha Guddida Socdaalku kama hadli karo wax ku saabsan tan telefoonka iyaddoo sababtu tahay sharciya qarsoodiga. Soo qaado kaadhkaaga LMA marka aad doonayso in aad booqato goobta soo dhowaynta.